संसदीय समिति बैठकः शीर्ष नेताकैै रुचि छैन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
संसदीय समिति बैठकः शीर्ष नेताकैै रुचि छैन
प्रकाशित मिति १० चैत्र २०७५, आईतवार १७:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आक्कल झुक्कल देखापर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संसदीय बैठकमा भने नगन्य रूपमा जाने गरेका छन् । दलकै कार्यक्रममा बढी व्यस्त रहने नेताहरू समितिमा हुने महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी नै हुँदैनन् । बरु समितिले नै उपसमिति बनाएर शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न खटाउने गर्दछ ।
बैठकमा सहभागी नहुनेमा अधिकांश नेता नेपाली कांग्रेसका रहेका छन् । नेकपाका नेताहरू पनि अनुपस्थित हुने सूचीमा धेरै पछाडि भने छैनन् । संसदीय समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म एकपटक पनि हाजिर भएका छैनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवा विकास तथा प्राविधिक समितिमा छन् । गत साउन २१ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म समितिका ३४ वटा बैठक बसेपछि देउवा कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । बैठकमा नआएको कुरा स्वयं संसद्ले देउवालाई भन्दा पनि ‘भ्याएको छैन, भ्याएपछि आइहाल्छु नि’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । शून्य सहभागी हुनेमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद कर्मा घले पनि छन् । महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेकी उनी समितिका कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएकी छैनन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अहिलेसम्म एकपटक मात्र बैठकमा सहभागी भएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनी पुष ११ गते बसेको बैठकमा मात्र उनले सहभागिता जनाएका थिए । बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पहिलोचोटि सहभागी हुने अवसर पाएँ । चाहँदा चाहँदै पनि अन्य कामको चापले आउन सकेको थिइनँ ।
अबदेखि समिति बैठकमा सकेसम्म नियमित उपस्थित हुनेछु’, यद्यपि, त्यसपछिका बैठकमा उनी गएका छैनन् । कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छन् । उक्त समितिका हालसम्मका १६ वटा बैठकमध्ये गिरीको एउटा बैठकमा मात्रै सहभागिता छ ।
कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्री शशांक कोइराला पनि समितिको बैठकमा खासै जाने गरेका छैनन् । अधिकांश समय कार्यकर्ताको बीचमा गुजार्ने यी दुई नेता अर्थ समितिका सदस्य हुन् । तर, दुवै नेता समिति बैठकमा दुइपटक मात्रै उपस्थित भए ।
विकास तथा प्रविधि समितिमै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता झलनाथ खनालको उपस्थिति ११ दिन रहेको छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको समिति बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थिति छ । उक्त समितिका सबै बैठकमा उपस्थित हुने गुरुङ मात्र हुन् । गत साउनमा समिति गठन भएपछि बसेका २० बैठकमध्ये सबै बैठकमा उनको उपस्थिति रहेको हाजिरी रेकर्डमा उल्लेख छ । कानुन समितिमा रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ २० वटामध्ये १८ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । सोही समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको भने आधा अर्थात्, १० वटा बैठकमा उपस्थित रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत नेता माधवकुमार नेपाल समितिका बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सांसद हुन् । समितिका १६ वटा बैठकमध्ये नेपालको १३ वटा बैठकमा सहभागिता छ । गत असोज १२ गते सांसद नेपालकै संयोजकत्वमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित सञ्चालनमा रहेका देशभरका विमानस्थलको अध्ययनका लागि उपसमिति गठन भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमै रहेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको उपस्थिति भने मूल समितिमा ८ दिन मात्रै छ । सोही समितिमा रहेका नेकपामा नेता भीम रावलको १२ दिन उपस्थिति रहेको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र नेकपाकै अर्का सांसद योगेश भट्टराई पनि समितिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सांसद हुन । दुवै नेता शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छन् । शिक्षा स्वास्थ्य समितिमै रहेका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाको भने ३३ मध्ये १६ दिन मात्रै उपस्थिति रहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ समितिमा छन् । ३२ वटा बैठकमध्ये १२ वटा बैठकमा भट्टराई सहभागी भएको रेकर्ड छ । अर्थ समितिमै रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर ३२ मध्ये १५ वटा बैठकमा सहभागी छन् । सांसदले समयमा समितिको बैठक सुरु नगर्दा पनि सहभागिता जनाउन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।
लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम ७० प्रतिशत
लुम्बिनी । अहिलेसम्म लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ ।
सन् १९६७ अप्रिल २३ मा राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव…
आफूले भनेजस्तो नभएपछि वडाध्यक्षले दिए राजीनामा
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ७ का वडाअध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । वडाअध्यक्ष पाण्डेले इमेलमार्फत पदबाट राजीनामा…
‘भुराभुरी भनेर अपमानित गरे, प्यार-प्यार बोली भनेर बैठकमै हप्काए’
काठमाडौं । अभियोग १– विनाअध्ययन र विना दर्शन राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । त्यही भएर काठमाडौंको मेयरको उम्मेद्वार बनेर…
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ सेवा नपुगेका स्थानीय तहमा तत्काल सेवा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन्…
पर्वत । पर्वतको महाशीला-४ पाखापानीमा करेन्ट लागेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।
शुक्रबार बिहान १० बजेको समयमा विद्युत् पोल गाड्ने…
डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन विद्यार्थीले रोके, मुख्य मन्त्रीले समेत भेट्न पाएनन्
जुम्ला । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौ ल्याउन विद्यार्थीले रोकेको छ । प्रहरीलाई…